Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ngwa Telehealth ọhụrụ na-enye ụzọ ka mma iji gbaa ụlọ ọrụ ahụike mebere
ExamRoom Live na-eme ka ọrụ dịrị ndị dọkịta na ndị ọrụ mfe. Ngwa webụ a na-enye ụzọ ka mma iji hụ ndị ọrịa ma mee usoro ahụike. ExamRoom Live na-ewepụ ịdenye aha maka ọtụtụ nyiwe iji jikwaa telehealth, ịkwụ ụgwọ, ozi ederede, Efax, na nsochi oge. Ugbu a ngwa ọrụ niile dị mkpa dị n'otu ebe! Ịbanye na-ewe ihe na-erughị nkeji 10, ọnụahịa na-amalite na $10 kwa ọnwa.
Karịrị nleta vidiyo.
Ụzọ "ọ dịghị ngwa achọrọ" maka telehealth dị iche na ngwanrọ webụ nkwurịta okwu vidiyo ị nwere ike ịnwale na mbụ. Ọ bụ kpọmkwem maka ndị ọkachamara ahụike. Ma ọ dịghị ngwa ibudatara maka ndị dọkịta, ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ndị ọrịa.
• Dabara na ụkpụrụ HIPAA
• Na-agbaso usoro ọrụ ụlọ ọrụ ahụike maka ndị ọrịa na kọntaktị
• Na-enye ndị dọkịta ohere ịnakọta copays ma mee azụmahịa azụmahịa ndị ọzọ
• Ọnụ ahịa Ala carte na-enye ohere ka omume họrọ atụmatụ ndị achọrọ kacha
• Ndepụta atụmatụ gụnyere telehealth, Efax, SMS, ebe ịkwụ ụgwọ, elekere oge, nkọwa ndị ọrịa, na onye njikwa kọntaktị.
"Anyị nwere obi ụtọ iji dozie nsogbu maka ndị mmadụ na ngalaba ahụike n'ụzọ dị mkpa," Josh Lopez, onye mmekọ na onye mmepụta na ExamRoom Live kwuru. "Anyị wuru ikpo okwu a iji rụọ ọrụ ka ụlọ ọrụ ndị dọkịta si arụ ọrụ na nha maka mkpa ha pụrụ iche."
Omume ọ bụla pụrụ iche.
• Ọpụrụiche ma ọ bụ omume nha ọ bụla nwere ike irite uru site na ngwa ọhụrụ a, ihe niile dị n'otu:
• Ngwa ngwa, nhazi dị mfe
• Na-anakọta ụgwọ ọrụ n'aka ndị ọrịa mgbe ị na-arụ ọrụ
• Ozi ederede, efax na nkata ụlọ ọrụ mkpuchi mkpa nkwukọrịta
• Ndị dọkịta nwere ike were oge ọ bụla site n'ebe ọ bụla
• Ndị ọrụ nwere ike isi n'ụlọ rụọ ọrụ mgbe achọrọ ya
• Wuru na-oge elekere atụmatụ soro ọrụ awa maka ugwo
• Atụmatụ na-agbanwe agbanwe na-enye gị ohere ịhọrọ ma họrọ njirimara kachasị mma maka ụlọ ọrụ gị
• Nkwado enyi na enyi sitere na otu mmepe nke San Diego
Isi aka n'akụkụ onye ọrịa, kwa!